Mgbugbu - Igodo nke ntutu gị ito ngwa ngwa | Bezzia
Nchapu bụ isi ihe na-eme ka ntutu gị too ngwa ngwa
Susana godoy | 07/04/2021 12:00 | Mma
Ọ bụghị oge mbụ anyị chọrọ ịhụ ka ntutu isi anyị na-eto ngwa ngwa. Ọfọn, n'ezie ike gwụgoro gị ịchọ ụdị azịza ọ bụla maka ya. Taa, anyị ga - ahụ otu ihe kachasị mma, nke anyị nwere na mkpịsị aka anyị mana ikekwe anyị anaghị enye ya oge niile mkpa ọ na - eburu: ikpochapụ.
N'ihi na dị ka ọ na-eme na akụkụ ahụ ndị ọzọ, exfoliation bụ usoro ga-eme ka anụ ahụ anyị dịkwuo mma. Ọ bụ n'ihi nke ahụ ọ bụrụ na anyị na-eche banyere ntutu isi, ma ọ bụ karịa ntutu isi, agaghị ahapụ ya n'azụ. You chọrọ ịma usoro ndị ị kwesịrị ịgbaso?
1 Gini mere ichota ogwu bu isi ihe na - eme ngwa ngwa?
2 Jiri kọfị gbasaa isi ala
3 Sugar na mmanụ oliv maka ntutu gị
4 Sugar na lemon
Gini mere ichota ogwu bu isi ihe na - eme ngwa ngwa?
Dị ka anyị maara nke ọma, exfoliate na-asị goodbye ndị nwụrụ anwụ niime ụlọnga. Ya mere, mgbe anyị mere ya na akpụkpọ ahụ, anyị ga-ewepụ ihe niile na-emebiga ihe ókè, iji nye ohere maka mmelite. N'okwu a, ihe yiri nke ahụ na-eme n'ihi na ihe anyị ga-eme bụ ịmịcha isi anyị, nke na-achọ ya mgbe niile. Ọ bụ mpaghara ebe abụba na-agbakọ n'ọtụtụ ọnọdụ, ebe ndị ọzọ bụ nkụ. Site na mma exfoliation anyị ga-enyere anụahụ aka na mpaghara a, iji sị goodbye ụfọdụ ngwaahịa residues na mgbe ụfọdụ-anọgide na ntutu na-akpali akpali mgbasa nke mere na ntutu na-amalite na-eto eto ike karịa mgbe ọ bụla. Nwere ike ịhụ ihe a niile site na itinye ụfọdụ ọgwụgwọ sitere n'okike anyị na-atụ aro.
Jiri kọfị gbasaa isi ala
Kọfị kọfị bụ otu n'ime ọgwụgwọ kachasị eji eme ihe mgbe anyị chọrọ ịmịpụ. Na mgbakwunye, ọ bụ ngwa ọrụ nke anyị niile ji n’aka na anyị nwere n’ụlọ. Yabụ, anyị ga - achọ kọfị tablespoons 4 iji malite ịkwadebe ngwakọta anyị. Mana ka ịhịa aka n'ahụ wee zuo oke ma ọ dịkwaịrị anyị mfe karịa, ọ dịghị Gwakọta kọfị na tablespoons abụọ nke yogọt ma ọ bụ na ịnweghị ya, obere mmanụ oyibo. Ya mere na nke a na-enyere anyị aka karịa mgbe ị na-eme ịhịa aka n'ahụ. Nke a ga-adị na mkpịsị aka aka, na-enweghị nrụgide dị ukwuu ma na-ekpuchi mpaghara ahụ dum nke ọma.
Sugar na mmanụ oliv maka ntutu gị
Nhọrọ ọzọ ị ga - eme iji gbasaa bụ iji nyere anyị aka shuga. Gị granites ga-ahapụ anyị a ukwuu n'ihi na-atụle. Mana ọ bụ eziokwu na anyị ga - ejikọ ya na ihe ọzọ, nke mere na ọ ga - eme nke ọma na akpụkpọ ahụ. N'okwu a, ọ ga-abụ mmanụ oliv. Dị ka anyị maara nke ọma, nke a bụ ọrụ maka inye hydration, na mgbakwunye na iwepu ụdị mkpofu niile na inye anyị antioxidants. Ọ bụ ihe ọzọ nke echiche na-amasị anyị maka ịdị mfe ịrụ na n'ihi na ya nnukwu utịp.
Sugar na lemon
Ngwọta a zuru oke maka ndị nwere ntutu ntutu mmanu. N'ihi na dị ka anyị si mara lemon ga-ahụ maka ịchịkwa sebum ahụ. Yabụ na ya, shuga ga-abata, nke ga-achịkwa ọzọ maka ịdọrọ unyi niile anyị nwere. Maka ọgwụgwọ dịka nke a, ọ dịghị ihe dịka inwe otu ụdị nke otu ihe na ọzọ. Chetakwa, lemon dị na ntutu gị, ọ bụrụ na ị nweta anyanwụ, nwere ike ime ka ọ dị nro. Yabụ, ụdị echiche ndị a kachasị mma mgbe niile n'abalị mgbe anyị anaghị apụ apụ. Ntutu isi gị kwesịrị ịdịtụ mmiri mmiri mgbe ị gara itinye ya n'ọrụ. Site na ebe a, ị ga-amalite site na okirikiri okirikiri na mgbe nkeji ole na ole, ị nwere ike ịsacha ntutu gị dị ka ọ dị na mbụ. Surely ga-ahụ nsogbu ya ngwa ngwa!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Nchapu bụ isi ihe na-eme ka ntutu gị too ngwa ngwa
Inflatable Jacuzzi: you ma nnukwu elele dị na ya
Obodo 5 dị na France ebe ịchọrọ ibi